Nin Soomaali ah oo xaas uu qabi jirey & saaxiibteed si xun u toorriyeeyay oo la qabtay! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Nin Soomaali ah oo xaas uu qabi jirey & saaxiibteed si xun...
Nin Soomaali ah oo xaas uu qabi jirey & saaxiibteed si xun u toorriyeeyay oo la qabtay!
(Roseville, MIN) 30 Maarso 2019 – Wiil Soomaaliyeed oo 23-jir ah oo reer Minneapolis ayaa haatan ku eedaysan laba kiis oo isku day dil ah ka gadaal markii uu toorriyeeyay xaaskiisii hore iyo saaxiibteed oo ku sugnaa halbeergo yar oo la yiraahdo Motel 6 oo ku taalla Roseville, horraantii todobaadkan.
Wiilkan oo lagu magacaabo, Axmed Maxamed Hilowle ayaa 20 sano oo xabsi ku mutaysan kara kiis kasta, taas oo ka dhigan 40 sano isu gayn ahaan.
Sida lagu sheegay dacwadiisa, wuxuu weerarku dhacay subaxdii Khamiistii kahor aroortii 6:43 a.m. isagoo dhibanayaasha ku beegsaday Motel 6 oo ku yaalla jidka wayn ee Cleveland Avenue ee magaalada Roseville oo isla Minnesota ah.
Hilowle xaaskiisii hore, wiil yar oo ay dhashay iyo gabar ay saaxiib ahaayeen oo gadaal uga soo biirtay ayaa albeergadan yar joogey si ay uga fogaato ninkeedii hore.
Muddadaas ayuu Hilowle wuxuu bilaabay inuu si joogto ah farriimo ugu soo diro, iyadoo markii dambe u sheegtay meesha ay joogto.
Khamiistii ayuu u yimid isagoo musoo marmarsooday inuu gaarigiisa qaadanayo, balse halkii uu tegi lahaa wuxuu ku yiri, “Adiga ama aniga mid baa dhimanaya” wuxuuna u raacay qolkeeda.
Markii ay gudaha galeen ayuu musqusha usii dhaafay, wuxuuna soo laabtay isagoo middi u qarsoonayd la haadaya, halkaasoo uu weerar ku ekeeyay labadii gabdhood oo uu doonayay inuu dilo.
Wuxuu xaaskiisii ka dhaawacay xabadka, qoorta, madaxa iyo gacanta bidix, halka uu saaxiibteed ka dhaawacay garabka bidix, gacanta midig, laf-dhabarta iyo madaxa. Labadooduba way soo kabanayaan iminka.
Hilowle oo in yar kaddib laga qabtay wadada Fairview Avenue oo ku dhacda Highway 36, isagoo gacmaha iyo jaakadda dhiig ku leh isla markaana raalli gelin bixinaya isagoo leh “waa dhiiggoodii,” ayaa gacanta lagu dhigay wuxuuna iminka ku xiran yahay xabsiga Ramsey County Jail.
Previous articleFacebook oo qaaday tillaabo ay Soomaali fara badani ku farxi doonaan!
Next articleXukumaadda oo iminka u fadhida kulan deg deg ah oo aan caadi ahayn! (Go’aamada laga filan karo)